ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများနှင့် ယင်းတို့၏ဘုရားခံယူယုံကြည်ချက်များ - ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် နယူးအေ့ဂျ် (ခေါ်) ခေတ်သစ်ဘာသာ
ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ဘဝကို အောင်မြင်မှုနဲ့ ဖြတ်သန်းလိုကြပြီး တချို့က သူတို့ဟာ အောင်မြင်ပါတယ်လို့ ခံယူကြ တယ်။ ဒါဆို ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေကရော? အဲဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေက ကျနော်တို့ဘဝတွေအတွက် ပိုမိုလေးနက် တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေကိုပေးပါသလား?
အောက်မှာ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ခေတ်သစ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာများ အကြောင်းကို ကြည့်ရအောင်။* ဘာသာတစ်ခုစီရဲ့အချုပ်ဖော်ပြချက်၊ သူတို့ရဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ အဲဒီဘာသာကနေ ဘာအကျိုးကျေးဇူး ခံစားနိုင်သလဲဆိုတာတွေ ပြောထားတယ်။ အဆုံးမှာ ယေရှုရဲ့သွန်သင်မှုဟာ အခြားဘာသာကြီးတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
* ဒီဘာသာတရားတွေတစ်ခုစီမှာ ယုံကြည်ချက်တွေကွဲပြားတဲ့ ဂိုဏ်းကွဲတွေရှိပါတယ်။ ဒီမှာပြောထားတဲ့ဖော်ပြချက် ကတော့ ဘာသာတစ်ခုစီရဲ့ အဓိကယုံကြည်ချက်တွေကို ဗဟိုပြုဆွေးနွေးထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကိုပဲရွေးချယ် ထားပြီး ဂျူးဘာသာလို အခြားဘာသာကြီးတွေအကြောင်း အကျဉ်းချုပ်သာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အဓိကဘာသာကြီးများ - ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ။ ဟိန္ဒူအများစုက အန္တိမ(အဆုံးစွန်)တစ်ဆူတည်းပေါင်း စည်းခြင်း (ဘရာမင်း) ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘရာမင်းကို အသင်္ချေများပြားတဲ့ နတ်ဘုရားနဲ့နတ် ဘုရားမတွေက ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီသရုပ်ဖွင့်ပြတဲ့ အမျိုးမျိုးသောနတ်ဘုရားနဲ့နတ်ဘုရားမတွေဟာ ဆင်းတုတွေ၊ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ၊ ဂုရုဘုန်းကြီးတွေ၊ မြစ်ချောင်းတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေ စသည်တို့အထဲမှာ အသွင်အယောင်ပြောင်း နေကြတယ်။
ဟိန္ဒူများဟာ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝရဲ့အနေအထားကို အတိတ်ဘဝရဲ့ကံ(လုပ်ဆောင်ချက်များ)က အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် ဟိန္ဒူဘာသာက ဒီဘဝရဲ့ဒုက္ခနဲ့အဆိုးတွေအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ရှင်းပြချက်တစ်ခုကိုပေး ပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့အရင်ပြုမူပုံ မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင် လက်ရှိဘဝမှာ ကြီးမားသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို လျော်ညီစွာ တွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ နာကျင်မှု၊ ရောဂါ၊ ဆင်းရဲခြင်း (သို့) ရေကြီးခြင်းလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဟာ အရင်ဘဝက သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်များကြောင့် ထိုက်တန်လို့ခံစားရတာပါ။
ဟိန္ဒူတစ်ယောက်ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ ကာရ်မာ(ကံ)ရဲ့နိယာမကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ .. စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်ဝင်စားခြင်း ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဝိညာဉ်သာလျှင် အရေးကြီးပြီး တစ်နေ့ကျရင် ပြန်ဝင်စားတဲ့သံသရာကနေ လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိန္ဒူဘာသာက လူ့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ပြည့်စုံမှုကိုရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးတယ်။ ဒီကာရ်မာသံသရာကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းသုံးခုကတော့- (၁) ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား (သို့) နတ် ဘုရားမတစ်ပါးပါးကို အမြတ်တနိုး ဆည်းကပ်ရမယ်။ (၂) ဘရာမင်း (တစ်ဆူတည်းဖြစ်ခြင်း) ကို အာရုံပြုအားထုတ် ခြင်းကနေ အသိတရားမှာ တိုးတက်ရမယ် … ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေဟာ အစစ်အမှန်မဟုတ်၊ လူ့ရဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဖြစ်ခြင်းဟာ အရိပ်သာဖြစ်ပြီး ဘရာမင်းသာလျှင် အစစ်အမှန် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ဘာသာတရားရဲ့အမျိုးမျိုးသော အခမ်းအနားတွေနဲ့ ထုံးတမ်းတွေမှာ နှစ်မြှုပ်ထားပါ။
အဓိကဘာသာကြီးများ - ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ။ ခေတ်သစ်ဘာသာက လူ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအား (သို့) ဘုရား သဖွယ်ဖြစ်ခြင်းကို တိုးတက်မြှင့်တင်ပေးတယ်။ ဘုရားလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ ခေတ်သစ်ဘာသာဝင်တွေက စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ လူတို့မမှီနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ မြင့်မားတဲ့အသိဉာဏ်ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရား၊ လောကဓာတ်၊ စကြာဝဠာအဖြစ် ရှုမြင်ကြမှာပါ။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့တွေ့သမျှ၊ ကြားသမျှ၊ ထိတွေ့ခံစားသမျှ (သို့) စိတ်ကူးသမျှအားလုံးကို ဘုရား အဖြစ်မှတ်ယူရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလွန်တရာကျယ်ပြန့်နှံ့စပ်တဲ့ ခေတ်သစ်ဘာသာဟာ သူ့ကိုယ်သူ ရှေးဟောင်းဘာသာရေးအစဉ်အလာတွေရဲ့ အချုပ်အဖြစ် အသွင်ဆောင်တယ်။ ယင်းက ဘုရားနဲ့ဘုရားမတွေများစွာကို (ဟိန္ဒူမှာလို) လက်ခံတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်လို့ ရှုမြင်ပြီး၊ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွမ်းအား၊ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုများနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘုရားရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးကို ကျော်လွန်တာကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဟာ အရာခပ်သိမ်းရဲ့ ဖန်တီးသူ၊ ထိန်းချုပ်သူနဲ့ ဘုရားကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ လူကအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်တဲ့အရာရဲ့ အပြင်မှာ အစစ်အမှန်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ခေတ်သစ်ဘာသာက စိတ်ပြောင်းစိတ်လွဲမှုပညာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဘုရားသဖွယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကျင့်ကြံတိုးတက်လာစေရန် အတွက် အရှေ့တိုင်းဝိဇ္ဇာအတတ်နဲ့ မှော်အတတ်ပညာ၊ ပြီးတော့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဂါထာ၊ စည်းချက်လေ့ ကျင့်ခန်း၊ အာရုံပြုလေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့သော ရုပ်လွန်ပညာနဲ့စိတ်တန်ခိုးနည်းပညာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်ကြား ပေးပါတယ်။
လူတွေကြုံတွေ့တဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းတဲ့အရာ (ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ဒေါသ၊ အတ္တ၊ နာကျင်မှု) တွေကို အစစ် အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ယူတယ်။ သူတို့ကသူတို့ဘဝအပေါ် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အတွက် သူတို့ဘဝဟာ မှန်တယ်၊ အပျက်သဘောမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် နာကျင်စရာမရှိပါဘူးတဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယုံကြည်မှုမှာတိုးတက်လာပြီး နောက်ဆုံး တရားသေနဲ့ ရုပ်ဒြပ်ရှိတဲ့အမှန်တရားဆိုတာ မရှိဘူးလို့ပဲ မြင်လာပါတယ်။ လူတစ်ဦးဟာ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်လာပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်ရပ်တည်ခြင်းကို ဖန်တီးပါတယ်။
အဓိကဘာသာကြီးများ - ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘယ်ဘုရားနဲ့နတ်ဘုရားကိုမှ ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ပလူတွေက သူတို့ဟာဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓ (သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ) ကိုယ်တိုင်က သူဘုရားပါလို့ ဘယ်တော့မှမကြွေးကြော်ခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကသာ- သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့ ဓမ္မဉာဏ်အလင်း၊ ယင်းဉာဏ်အလင်းနဲ့အတူ ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းသံသရာကနေ လွတ်မြောက်မှုကို ဗုဒ္ဓကတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရှုမြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုက လူတစ်ယောက်ဟာ မရေမတွက် နိုင်အောင် ပြန်လည်ဝင်စားတယ်၊ အဲဒါက ဒုက္ခကို မရှောင်မလွှဲသာ ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒီ တစ်ယောက်က အဲဒီသံသရာကို အဆုံးသတ်ဖို့ ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူ့ရဲ့အာသာဆန္ဒတွေ၊ မုန်းတီး မနစ်မြို့မှုနဲ့ စိတ်ထင်ယောင်မှားခြင်းတို့က အဲဒီပြန်မွေးဖွားခြင်းတွေကို ဖြစ်စေတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ဦးရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ ကာမဂုဏ်ဆန္ဒတွေနဲ့ မိမိကိုနှောင်ဖွဲ့တွယ်တာစေမယ့်အရာတွေ ဖယ်ရှားနိုင်အောင် စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေဖို့နဲ့ ဆန္ဒတဏှာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေဟာ ဘာသာရေးဥပဒေသတွေအများကြီးနဲ့ တသွေမတိမ်းလိုက်နာရတဲ့ တရားအားထုတ်မှုတွေကို လိုက်နာ စောင့်ရှောက်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓတစ်ယောက်က အာရုံပြုတရားကျင့်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဘုရားတစ်ပါးပါးကို ဆုတောင်းနေ တာ (သို့) အာရုံပြုနေတာနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိမိကိုယ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းသဘော ပိုသက်ရောက်ပါတယ်။ တရားအားထုတ် ခြင်း (ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း) အားဖြင့် လူတစ်ယောက်ဟာ နိဗ္ဗာန် -- ဆန္ဒမီးတွေ “ချုပ်ငြိမ်းရာ” ကို ရောက်ရှိမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာက တခြားအဓိကဘာသာကြီးတွေမှာလိုပဲ တူညီအရာကိုပေးပါတယ် - လူတစ်ယောက် ဘဝကိုကျင့်ကြံနေ ထိုင်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ၊ စံနှုန်းတွေနဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပါပဲ။
အဓိကဘာသာကြီးများ - ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ။ မွတ်ဆလင်များဟာ အာလ္လာလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ဆူတည်းကြီး မြတ်သော ဘုရားရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ သူဟာ လူတွေအားလုံးထက် အကန့်အသတ်မရှိ ကြီးမြတ်ပြီး လူသားတို့ ဉာဏ်မမှီနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အာလ္လာကို စကြာဝဠာကြီးဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ အကောင်းအဆိုးအားလုံးရဲ့ဇာစ်မြစ်လို့ရှုမြင် တယ်။ ဖြစ်ပျက်သမျှခပ်သိမ်းဟာ အာလ္လာရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်တယ်။ သူဟာ သြဇာအာဏာရှိပြီး တင်းကျပ်တဲ့ တရားစီရင်သူဖြစ်ပြီး၊ လုံလောက်တဲ့ ကောင်းသောအလုပ်တွေနဲ့ ဘာသာရေးဆက်ကပ်မှုအပေါ် မူတည်ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူများအပေါ် သက်ညှာခွင့်လွှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်နဲ့ အာလ္လာရဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အာလ္လာအတွက်ကျွန်သဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တစ်ယောက်ဟာ တမန်တော်တချို့ကို လေးစားဂုဏ်ပြုပေမယ့် မိုဟာမက်ကို နောက်ဆုံးတမန်တော်အဖြစ် ခံယူပြီး သူ့ဟောကြားချက်တွေနဲ့ ဘဝပုံစံဟာ သူ့ရဲ့သြဇာအာဏာဖြစ်လာတယ်။ မွတ်ဆလင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာသာရေးဝတ္တရားငါးပါးကို လိုက်လျှောက်ရမယ် - (၁) အာလ္လာနဲ့ မိုဟာမက်တို့အကြောင်း ပါတဲ့ကျမ်းကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ရွတ်ဖတ်ရမယ်။ (၂) တစ်ရက်ငါးကြိမ် အာရဗီ (အာရပ်စကား) လို ဆုတောင်းချက်တွေကို ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဇျယ်ရမယ်။ (၃) ချို့တဲ့သူများကို ပေးကမ်းရမယ်။ (၄) နှစ်စဉ်တစ်လလုံး နေထွက်မှနေဝင်သည်အထိ အစာ၊ ရေ၊ လိင်မှုနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရမယ် (၅) တစ်သက်မှာတစ်ခါ မက္ကာမှာရှိတဲ့ ဂူဗိမာန်မှာ ဝတ်ပြုဖို့အတွက် ဘုရားဖူးခရီးသွားရမယ်။ သေလွန်တဲ့အခါ -- အဲဒီဝတ္တရားတွေမှာ သူ့ရဲ့သစ္စာရှိမှုအပေါ် မူတည်ပြီး -- မွတ်ဆလင် တစ်ယောက်ဟာ ပရိဒိသုခဘုံကို ဝင်စားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ ငရဲမှာ ထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံစားရ ပါမယ်။
လူများစွာအတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ ဘာသာရေးနဲ့ဘုရားအကြောင်း သူတို့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ အစ္စလာမ်က ကောင်းသောအလုပ်များနဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများအားဖြင့် လူတွေကိုးကွယ်တဲ့ အမြင့်ဆုံးဘုရားတစ်ပါးရှိတယ်လို့ သွန်သင်ပါတယ်။ သေတဲ့အခါ လူဟာသူ့ရဲ့ဘာသာရေးဆက်ကပ်မှုအရ အကျိုးခံစား မယ် ဒါမှမဟုတ် အပြစ်ပေးခံရမယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက အာလ္လာအတွက် မိမိအသက်တာကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း ဟာ ပရဒိသုခံဘုံဝင်စားဖို့ သေချာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အဓိကဘာသာကြီးများ - ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ။ ခရစ်ယာန်များဟာ သူ့ကိုယ်သူဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြပြီး ဒီဘဝမှာပင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိနိုင်တဲ့ မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူ လူ့ရဲ့ဗဟိုပြုချက် ဟာ ဘာသာရေးထုံးတမ်းဓလေ့တွေ (သို့) ကောင်းသောအလုပ်တွေလုပ်ခြင်းအပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ဘုရားကိုပိုမိုသိကျွမ်းခြင်းမှာ ပျော်ရွှင်ခံစားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်များဟာ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝကို ဘယ်လိုကြုံတွေ့ခံစားသလဲဆိုရင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင် ချက်များကိုသာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့စဉ်က ယေရှုဟာ ဘုရား သခင်ကိုလမ်းညွှန်တဲ့ တမန်တော်တစ်ပါးအဖြစ် (သို့) ဓမ္မဉာဏ်အလင်းသွန်သင်သူအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူမညွှန်းဆိုပါဘူး။ အဲဒီအစား ယေရှုဟာ လူသားပုံသဏ္ဌာန်ခံယူတဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဆိုမိန့်မြွက်ခဲ့တယ်။ သူဟာ အံ့ဖွယ်အမှု တွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်၊ လူတွေရဲ့အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်း ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ ပြောခဲ့ တယ်။ သူဟာ ခုလိုဖော်ပြချက်တွေကို မိန့်တော်မူခဲ့တယ်-“ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက် သောသူသည် မှောင်မိုက်၌မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့်မည်။”၁
ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာကို လူသားတွေအတွက် ဘုရားသခင်ပေးပို့တဲ့သတင်းစကားလို့ ခံယူယုံကြည်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ယေရှုသက်တော်စဉ်နဲ့ အံ့ဖွယ်အမှုတော်များ သမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ ဘုရား သခင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ၊ သူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့သမ္မာတရား၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့သူနဲ့ ကျွမ်းဝင်ဆက်သွယ်ရေး ဘယ်လိုရရှိနိုင် သလဲဆိုတာကို ဖွင့်ပြထားပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဟာ ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကို ရင်ဆိုင်နေရစေကာမူ လူတွေကိုစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးပြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်တဲ့ ဘုရားထံမှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တိုင်ပင်ကိုးစားနိုင်တယ်လို့ ကျမ်းစာက သွန်သင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဆုတောင်းသံတွေကို နားညောင်းအဖြေပေးတဲ့အတွက် သူ့ကိုကိုးစားသက်ဝင်တဲ့ အခါ ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
ဒီအဓိကဘာသာကြီးများရဲ့ ယုံကြည်မှုစနစ်များနဲ့ ဘုရားအမြင်များကို ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကို တွေ့မြင်ရတယ် -
ဟိန္ဒူတွေက များပြားလှတဲ့ နတ်ဘုရားများနဲ့ နတ်ဘုရားမများကို အသိအမှတ်ပြုတယ်။
ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေက ဘုရားမရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။
ခေတ်သစ်ဘာသာဝင်တွေက သူတို့ဟာဘုရားပါလို့ ယုံကြည်တယ်။
မွတ်ဆလင်တွေက တန်ခိုးကြီးပေမယ့် မသိနားမလည်နိုင်တဲ့ဘုရားကို ယုံကြည်တယ်။
ခရစ်ယာန်များက ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပြီး ချဉ်းကပ်လို့ရတဲ့ ဘုရားတစ်ပါးတည်းကို ယုံကြည်ပါတယ်။
ဘာသာတရားအားလုံးက တူညီတဲ့ဘုရားကို ကိုးကွယ်နေကြသလား? ခေတ်သစ်ဘာသာက လူတိုင်း စကြာဝဠာလုံး ဆိုင်ရာ မြင့်မားတဲ့အသိဉာဏ်ကို ဗဟိုမဏ္ဍိုင်ပြုရမယ်လို့ သွန်သင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အစ္စလာမ်အတွက် သူတို့ရဲ့ တစ်ဆူဘုရားကို စွန့်လွှတ်ဖို့လိုအပ်စေမယ်၊ ဟိန္ဒူဝါဒအတွက် သူတို့ရဲ့မြောက်များစွာသောဘုရားများကို စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုအပ်စေမယ်၊ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဝါဒီအတွက် ဘုရားတစ်ပါးရှိလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများ (ဟိန္ဒူဝါဒီ၊ ခေတ်သစ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒီ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ခြင်း) တစ်ခုစီတိုင်းဟာ အတော့်ကို တမူထူးခြားကြတယ်။ ဒါတွေကနေ လက်ရှိဘဝမှာ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တဲ့ မေတ္တာရှင်ဘုရားတစ်ပါးရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုထဲဖိတ်ခေါ်နေပြီး နှစ်သိမ့်အား ပေးသူ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူနဲ့ ကျနော်တို့ကိုချစ်တဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားသခင်အဖြစ် ကျနော်တို့ထံ ရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရား တစ်ပါးအကြောင်းကို ယေရှုခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ဟိန္ဒူမှာ ကာရ်မာကနေ လွတ်မြောက်မှုရနိုင်ဖို့ မိမိဖာသာကြိုးစားရတယ်။ ခေတ်သစ်မှာ မိမိဘုရားဖြစ်ခြင်းအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရတယ်။ ဗုဒ္ဓမှာ တဏှာကနေလွတ်မြောက်ရာလမ်းကို မိမိဖာသာ ရှာဖွေရတယ်။ ပြီးတော့ အစ္စလာမ်မှာ သေတဲ့အခါ ပရဒိသုခဘုံစံစားဖို့ ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းတွေ လိုက်လျှောက်ရတယ်။ ယေရှုရဲ့သွန်သင်မှုမှာ တော့ ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ဘုရားနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံမှု -- နောင်ဘဝအထိဆက်သွားမယ့်ဆက်ဆံရေး -- ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေကတော့ ရပါတယ်။ သင် ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ရုံမက သင့်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံပြီး ချစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနိုင် ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများဟာ လူတွေကို ဘာသာရေးမှာစံအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာအားကိုး စေတယ်။
ဥပမာ၊ ဗုဒ္ဓက အပြစ်ကင်းကြောင်း ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူး။ မိုဟာမက်လည်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားလိုအပ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တယ်။ “မည်မျှပင် ပညာရှိစေကာမူ၊ မည်မျှပင် ပါရမီရှိစေကာမူ၊ အခြားပရောဖက်(ဗျာဒိတ်ဆရာ)များ၊ ဂုရုကြီးများနှင့် တရားဟောသူများ မည်မျှပင် သြဇာညောင်း လွှမ်းမိုးနိုင်စေကာမူ၊ ကျန်သောကျွနု်ပ်တို့ကဲ့သို့ပင် သူတို့ ကိုယ်တိုင် မပြည့်စုံကြောင်း သိနားလည်ထားသည့် စိတ်သဘောရှိခဲ့ကြပေသည်။”၂
သို့ပေမယ့် ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်အပြစ်ရှိကြောင်း ဘယ်တော့မှ ရည်ညွှန်းမပြောဆိုခဲ့ပါဘူး။ ထို့အစား၊ လူတွေရဲ့အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ အမှားတွေ၊ အများက နှိမ့်ချထင်မြင်စေလောက်တဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ၊ ကိုယ်တိုင်မနှစ်သက်တဲ့အနာအဆာတွေ … စွဲလန်းမှု တစ်ခုခု၊ စိတ်ယုတ်ညံ့မှု၊ မစင်ကြယ်မှု၊ မနှစ်သက်ဖွယ် ဝေဖန်ချက်တွေလို … ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်းသိမြင်ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ကိုချစ်ပေမယ့် အပြစ်ကိုတော့မုန်းပါတယ်။ အပြစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာက သူ့အားသိရှိခြင်းမှဝေးကွာခြင်းပါလို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံရပြီး သူ့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ လမ်းတစ်လမ်း ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော် ယေရှုဟာ လူသားပုံသဏ္ဌာန် နဲ့ဘုရားအဖြစ် ကျနော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကားတိုင်မှာအပြစ်ကြွေးခံစားရင်း ကျနော်တို့အစား လိုလိုလားလားပဲ အသေခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ခရစ်တော်သည် ငါတို့အဖို့အလိုငှာ အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသည်အရာကို ငါတို့သည်ထောက်၍၊ မေတ္တာတော်ကို သိရကြပြီ။”၃ လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့အတွက် ယေရှုအသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ကို ပြည့်စုံတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဆိုလို ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် ယေရှုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ စကြာဝဠာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားဟာ ကျနော်တို့ကိုချစ်ပြီး ကျနော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်လိုပါတယ်။ “သားတော်အားဖြင့် ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါး တည်းသောသားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌၊ ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။”၄
ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့ အပြစ်နဲ့အပြစ်စွဲစိတ်ထားကနေ အမှန်လွတ်မြောက်ခြင်းကို ခရစ်တော်မှတဆင့် ပေးနေ ပါတယ်။ လူ့ရဲ့ကျရှုံးမှုတွေအတွက် အနာဂတ်မှာပိုကောင်းလာတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ မှေးမှိန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်မလုပ်ပါဘူး။
ဘုရားသခင်ဟာ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် လူသားတွေကိုချဉ်းကပ်ပြီး သူ့အားသိရှိဖို့ရန်လမ်းတစ်လမ်း ပြင်ဆင်ပေး ပါတယ်။ “ဘုရားသခင်၏သားတောကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။”၅
ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့သူ့ကို သိစေလိုပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုထဲရှိနေဖို့ ကျနော်တို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုက “ငါ့ထံသို့လာသော သူသည် နောက်တဖန် အဆာအမွတ်မခံရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် နောက်တဖန် ရေငတ်မခံရ။ … ငါ့ထံသို့လာ သောသူကို ငါသည် အလျှင်းမပယ်။”၆ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုက လူတွေကို သူ့သွန်သင်မှုတွေကို လိုက်လျှောက်ဖို့ သာမဟုတ်၊ သူ့နောက်လိုက်ဖို့ ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။”၇ လို့ မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ မိမိကိုယ်တိုင်သမ္မာတရားဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်တဲ့ အရာမှာ သူတို့ဟာ သမ္မာတရားကိုပြောဆိုနေကြတယ်လို့ ပြောရုံမျှပြောခဲ့တဲ့ ဗျာဒိတ်ဆရာများနဲ့ ဘာသာရေးသွန်သင် သူများသက်သက်ထက် သာလွန်ပြီးတာသွားခဲ့ပါတယ်။၈
ယေရှုဟာ သူဟာဘုရားသခင်နဲ့ ထပ်တူညီမျှကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး သက်သေသက္ကာယ ပြသခဲ့တယ်။ လက်ဝါးကား တိုင်မှာ အဆုံးစီရင်ခံရမယ်ဖြစ်ပြီး သေလွန်ပြီးနောက် သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူက နောင်တစ်ဘဝ တစ်နေ့နေ့မှာ ပြန်လည်ဝင်စားမယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ (သူအဲဒီလိုပြန်ဝင်စားခဲ့ တယ်လို့ ဘယ်သူသိရှိခဲ့ပါသလဲ?) သူက မြှပ်နှံခံရပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ သူအသေသတ်ခံရတာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေကပဲ အသက်ရှင်လျက်နဲ့ ပြန်တွေ့ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ အဲဒီသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ယေရှုရဲ့ဂူသင်္ချိုင်း ဗလာထီးဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီး လူများစွာက သူ့ကိုရှင်လျက်နဲ့ ပြန်တွေ့ကြတယ်လို့ သက်သေထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ အခု ကျနော်တို့အား ထာဝရအသက်ကို ကမ်းလှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားမြောက်များစွာဟာ ကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးကြိုးပမ်းချက်များကို အထူးပြုပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော် နဲ့တော့ ဒါဟာ သင်နဲ့ဘုရားကြားထဲက အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သူ့ဆီသွားဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ “ထာဝရဘုရားသည် ပတ္ထနာပြုသောသူ (ခေါ်ဖိတ်သူသော) အပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပတ္ထနာပြုသောသူ (ခေါ်ဖိတ်သူ သော) အပေါင်းတို့၏ အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။”၉ သင့်ဆုတောင်းချက်ကို အဖြေပေးမယ့်၊ ပိုကြီးမားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးမယ့်၊ လမ်းညွှန်မှုကိုပေးမယ့်၊ သူ့မေတ္တာကိုပြသပြီး သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့် ဘုရားသခင်နဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ ယေရှုက “ငါမူကား သိုးတို့သည် သက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း။”၁ဝ လို့ မြွက်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘဝက အရာရာပြီးပြည့်စုံလာပြီး ပြဿနာတွေကင်းရှင်းနေမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာပင် မေတ္တာတော်မှာ သစ္စာရှိပြီး သင့်ဘဝထဲမှာ ပါဝင်ဖို့လိုလားနေတဲ့ ထိုဘုရားသခင်နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ဒါဟာ ရှစ်ပါးသီလ (သို့) မဏ္ဍိုင်ငါးပါး (သို့) ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း (သို့) ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ (သို့) ပညတ်တော် ဆယ်ပါးကဲ့သို့သော မိမိကိုယ်ကိုမိမိတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကျင့်ကြံရမယ့် နည်းစနစ်တစ်ခုအပေါ် ဆက်ကပ်ကြံ ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရာတွေဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရေးမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သား၊ ကောင်းစွာပြဋ္ဌာန်းထားပြီး လိုက်လျှောက်ရန်အဆင်ပြေတဲ့ လမ်းစဉ်တွေလို့ ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ အပြစ်ကင်းပြည့်စုံမှုရဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့ အခါ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာပြီး ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ အလှမ်းကွာနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အတွက် မျှော်လင့်စရာဟာ ဥပဒေဿများနဲ့ စံနှုန်းများကို လိုက်လျှောက်တဲ့အရာမှာ မရှိပါဘူး၊ သူ့ကိုယုံ ကြည်ခြင်းနဲ့ ကျနော်တို့အတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ကို အပြည့်အဝလက်ခံမယ့် ကယ်တင်ရှင် တစ်ပါးကို သိရှိခြင်းအရာမှာသာ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးကျင့်ကြံမှုများနဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်များအားဖြင့် ကောင်းကင်မှာ ကျနော်တို့ဝင်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို အစပြုလိုက်တဲ့အခါ ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာ ကျနော်တို့အတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝဥဿုံခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီး သင့်အတွက်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကို ကိုယ်တိုင်သိရှိလိုပါသလား?
ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို ယခုပင် သင်အစပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပြစ်အတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိပြီး သင့်အသက်တာထဲဝင်ရောက်စေဖို့ရန် ဘုရားသခင်ကို အမှန်အတိုင်းတောင်းခံခြင်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ယေရှုက “ငါသည် [သင်၏နှလုံးသား]တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကို ကြား၍ တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ ငါဝင်”၁၁ လာမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး နက်ရှိုင်းစွာချစ်တဲ့ဘုရား နဲ့အတူ ဆက်ဆံရေးကို အစပြုလိုပါသလား? ဒါဟာ သင့်နှလုံးသားနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆိုရင် အခုပဲ အစပြုနိုင်ပါတယ်- “အရှင်ဘုရား၊ အကျွနု်ပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး အကျွနု်ပ်နှလုံးသားထဲကို ယခုပင် ဝင်ရောက်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အကျွနု်ပ် အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယေရှု။ ကိုယ်တော်ကတိတော်ထားသည့်အတိုင်း အကျွနု်ပ် ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
သမ္မာကျမ်းစာက “ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင် ၏သား ဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။”၁၂ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို သင့်ဘဝထဲဝင်ရောက်လာဖို့ အရိုးခံအတိုင်း တောင်းဆိုပြီးပြီဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ရေးကို သင်အစပြုလိုက်ပါပြီ။ သင် အခုပဲ ဘုရားနဲ့ တွေ့လိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုပိုမိုသိကျွမ်းခြင်းတိုးတက်လာဖို့၊ သင့်အတွက်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုသိရှိဖို့၊ ဘယ်လိုဆုံး ဖြတ်ချက်မျိုးချဖို့ဖြစ်စေ သင့်ကို ဉာဏ်ပညာနဲ့လမ်းပြဖို့အတွက် သင့်ကိုမစကူညီလိုပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက “ရှင်ယောဟန်” လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းစောင်ဟာ ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးပဲဖြစ် ပါတယ်။ ယေရှုကိုသင့်အသက်တာထဲ ဖိတ်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အကြောင်း တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို သင်ပြောပြလိုကောင်း ပြောပြလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးတွေမှာ လူဟာ သွန်သင်မှုတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ လမ်းစဉ်တွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံမှု ရှိပါတယ်။ ယေရှုအားဖြင့်ကတော့ လူဟာ သင့်ကိုချစ်ပြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ဘုရားနဲ့ ဆက်ဆံမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ တယ်။ သူ့နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပြီး လက်ရှိဘဝအတွက် လက်ငင်းပင် သင့်ကိုလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်။ သူကသင့်ကို လမ်းစဉ်တစ်ခု၊ အတွေးအခေါ်တစ်ခု (ဒါမှမဟုတ်) ဘာသာရေးတစ်ခုလောက်ကိုသာ ညွှန်ပြနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုသိကျွမ်းဖို့၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားဖို့နဲ့ ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာ သူ့မေတ္တာ၌ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့ ကြိုဆိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကို ငါတို့သည်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့။”၁၃
(၁) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈း၁၂
(၂) Erwin W. Lutzer, အခြားဘုရားများအနက်မှ ခရစ်တော် (Christ Among Other Gods) (ချီကာဂို၊ မူဒီပုံနှိပ်စက်၊ ၁၉၉၄) စာမျက်နှာ ၆၃
(၃) ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပ-စောင် ၃း၁၆
(၄) ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပ-စောင် ၄း၉
(၅) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၃း၁၆
(၆) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၆း၃၅
(၇) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၄း၆
(၈) Lutzer, စာမျက်နှာ ၁ဝ၆
(၉) ဆာလံကျမ်း ၁၄၅း၁၈
(၁ဝ) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၁ဝ
(၁၁) ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၃း၂ဝ
(၁၂) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁း၁၂
(၁၃) ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပ-စောင် ၃း၁